is it possible to get pregnant when you have sex during your period – My Doctor
ကိုယ်ဝန်ရတယ် သန္ဓေတည်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုလဲ ?
ဒီလို ထူးခြားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပွားရန်အတွက် အမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့သုတ်ပိုးနဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ မျိုးဥတို့လိုအပ်ပါတယ် ။ အမျိုးသမီးသားဥအိမ်မှ မျိုးဥကို ထုတ်လုပ်ပြီး ၁၂ နာရီကနေ ၂၄ နာရီ အထိ အသက်ရှင်ပြီး အမျိုးသားတို့၏ သုတ်ပိုးကောင်မှာမူ သုံးရက်ခန့်အထိ ရှင်သန်နိုင်ပါတယ် ။
အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရာသီစက်ဝန်းဟာ ပုံမှန်အားဖြင် ၂၈ ရက်ပါ ။ ပထမဆုံးနေ့ဟာ သူရာသီစတင်တဲ့နေ့ပါ ။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ ပုံမှန်အားဖြင် ၁၄ ရက်ဝန်းကျင်ခန့်မှာ မမျိုးဥ ထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ် ။
မျိုးဥကြွေခြင်းဖြစ်စဉ်ဆိုသည်မှာ မျိုးဆက်ပွားရန် မျိုးဥကိုဘသားဥအိမ်မှထုတ်လွှတ်ခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ် ။ ထိုအချိန်တွင် သုတ်ပိုးကောင်နဲ့ သားအိမ်အတွင်းတွေ့ရှိပါက သန္ဓေတည်ခြင်းဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားပါတယ် ။
ဒီလိုမျိုးဥကြွေခြင်းဟာ အမျိုးသမီး တစ်ဦး နဲ့တစ်ဦး မတူပါဘူး ။
အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ ရာသီလာစဉ် ဘယ်လို ကိုယ်ဝန်ရနိုင်သလဲ ?
သင့်အနေနဲ့ ရာသီအစကာလ မိန်းမကိုယ်မှ သွေးဆင်ုးခင်းကို ရာသီလာခြင်းနှင့်လအမှတ်မှားနိုင်ပါတယ် ။ သင့်အနေနဲ့ မျိုးဥကြွေခြင်းဖြစ်စဉ်ကာလမှာ သွေးဆင်းနိုင်ပါတယ် ။ ဒါကို ရာသီလာခြင်းနှင့် အမှတ်မှားကာ လိင်ဆက်ဆံမိလျှင် သင့်အနေနှင့် ကိုယ်ဝန်ရရှိနိုင်ရန် အခွင့်အရေး များပြားပါတယ် ။
သာမာန်အားဖြင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအတွက် မျိုးဥကြွေခြင်းစက်ဝန်းဟာ ၂၈-၃၀ အြတွင်းဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့်သင့်အနေနဲ့ ရာသီလာစဉ် အတွင်းရော ရာင်္သလာပြီး ရက်အတော်ကြာအထိ ချစ်တင်းနှောပါက ဥကြွေခြင်းဖြစ်ရန် နည်းပါးပါတယ် ။
သို့သော် စက်ဝန်းကာတိုသည့် အမျိုးသမီးများတွင်မူ ရာသီလာခြင်းနှင့် ဥကြွေခြင်းကာလဟာ သူများနဲ့မတူနိုင်ပါ ။
နောက်တစ်ခုစဉ်းစားရန်မှာ အမျိုးသား သုတ်ပိုးကောင်ဟာ အမျိုးသမီးအတွင်း ၇၂ နာရီထိ နေနိုင်သည့်အတွက် သင်ရာသီအဆုံးကာလနှင့် တိုက်ဆိုင်နေပါကလဲ ကိုယ်ဝန်ရရင် အခွင့်အရေးအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ် ။
သင့်အနေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ရရန်ကြိုးစားနေတယ် ဆိုပါက ရာသီလာစဉ် ချစ်တင်းနှောခြင်းဟာ ကိုယ်ဝန်ရရှိနိုင်ရန် အခွင့်အရေးနည်းပါးပါတယ် ။
သင့်အနေနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုပါက သင့်အနေနဲ့ အကာအကွယ်ရှိသော ချစ်တင်းနှောခြင်းဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါတယ် ။ အကာအကွယ်အနေနဲ့ ကွန်ဒုံသုံးခြင်း ၊ တားဆေးသောက်ခြင်း အစရှိသည်တို့ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ် ။
တားဆေးလိုမျိုးဟာ လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သော ရောဂါတွေကိုမကာကွယ်ပေးနိုင်ပါဘူး ။ ဒါကြောင့် သင့်ပါတနာ အမျိုးသားကို ကွန်ဒုံသုံးခိုင်းခြင်းဟာ အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ် ။
အကျဉ်းချုပ်ပြောရလျှင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရာသီလာနေစဉ်ကာလမှာ ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ဟု သိထားကြသော်လည်း လုံးဝမရနိုင်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါကြောင့်သင့်အနေနဲ့ အမြဲတစေ အကာအကွယ်တမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုပေးခြင်းဟာ အသင့်လျော်ဆုံးပဲလဖြစ်ပါတယ် ။
DrMay ThantSyn	2018-11-05T14:00:40+00:00	November 5th, 2018|Categories: All Articles, Uncategorized, မျိုးဆက်ပွါးကျန်းမာရေး|0 Comments